PTZOptics သည် Joystick Controller အသစ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » PTZOptics သည် Joystick Controller အသစ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Downingtown, PA - ၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ PTZOpticsစျေးနှုန်းချိုသာသောအရည်အသွေးရှိသောစက်ရုပ်ကင်မရာများကိုထုတ်လုပ်သူ ဦး ဆောင်သော PT-SuperJoy-G1 Joystick Controller သည်အမှတ်စဉ်နှင့်ကွန်ယက်အခြေပြုကင်မရာထိန်းချုပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ SuperJoy သည်ရှုပ်ထွေးသော multicamera ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုမည်သည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆင့်ကိုမဆိုအသုံးပြုသူများ၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ထားရှိသည်။ အသုံးပြုသူများသည် PTZOptics သို့မဟုတ် HuddleCamHD ကင်မရာအားလုံးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သကဲ့သို့ Sony ကBirddog, Newtekနှင့်ရွေးချယ်ထားသောချိန်ညှိချက်များအတွက်အခြား PTZ ကင်မရာများ။
PTJOptics မှ ဦး ဆောင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သူ Matt Davis က“ SuperJoy အတွက်မှားယွင်းစွာအသုံးပြုမှုကိစ္စမရှိပါ။ သုံးစွဲသူများ၏လက်ရှိတည်ဆောက်မှုများနှင့်အတူဤပျော်ရွှင်ဖွယ်အမှတ်အသားကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကို universal အဖြစ်ပြုလုပ်ရန်၊ ဖြစ်နိုင်သမျှကိရိယာများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ သင်၏ဖြန့်ကျက်မှုမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊
Push-button Presets နှင့် On-The-Fly Adjustments
SuperJoy တွင်“ quick presets” (၉) ခုအပါအ ၀ င် PTZ ကင်မရာ ၂၅၅ ခုအထိကြိုတင်စီစဉ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့အားမြင်ကွင်းများကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သောခွင့်ပြုနိုင်သောကင်မရာထိန်းချုပ်အုပ်စု (၄) ခုကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။ SuperJoy ၏စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သောခလုတ် ၄ ခုသည်ကင်မရာထက်ကျော်လွန်သော 'super presets' ကိုစတင်ရန်၊ အလင်း၊ စပီကာများနှင့်ပြသမှုများအပါအဝင်ကွန်ယက်အခြေပြုကိရိယာများသို့ HTTP, UART, TCP သို့မဟုတ် UDP များမှတစ်ဆင့် custom command များကိုပေးပို့ရန်စီစဉ်နိုင်သည်။ IP ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုလက်တွေ့တွင် SuperJoy မှအစပျိုးနိုင်သည်။
SuperJoy သည်ကင်မရာအနေအထားနှင့်ချဲ့နိုင်မှုထက် ကျော်လွန်၍ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Incremental ခလုတ်များကို သုံး၍ အော်ပရေတာသည် pan, tilt, zoom နှင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ SuperJoy တွင်အဖုများ၊ ချုံ့ချဲ့ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အိုင်ရီးစ်တာ၊ ရှပ်တာများနှင့်အနီရောင်နှင့်အပြာအမြတ်တို့ကိုသေးငယ်သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ညှိနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုထိန်းညှိနိုင်သည့်အရာအားထိန်းညှိနိုင်သည့်စွမ်းအားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ built-in“ basic mode” သည် single-camera joystick control နှင့် presets များထက်အခြားထိန်းချုပ်မှုအများစုကိုပိတ်ထားသည်။ မည်သို့ပင် mode ကိုအသုံးပြုပါစေ SuperJoy သည်အသုံးပြုသူအတွက်ရရှိနိုင်သောခလုတ်များကိုထွန်းညှိပေးသည်။ Basic နှင့် matrix mode များသည်လုပ်အားပေးသူများနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအားအမှားပြုမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ပါဝင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Joystick တပ် ဦး
စွယ်စုံ, အစွမ်းထက်, သုံးစွဲနိုင်
ဒေါ်လာ ၉၈၉ ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သော US MSRP ကို ​​SuperJoy သည်အမျိုးမျိုးသော application များ၊ ထုတ်လုပ်မှုအရွယ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအစုံအလင်ကိုဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏ဘက်စုံသုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ကောင်းမွန်စွာညှိနှိုင်းနိုင်စွမ်းနှင့်အတူဤဖြေရှင်းချက်သည်အရှုပ်ထွေးဆုံး Multicamera ထုတ်လုပ်မှုကိုပင်ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ရောက်စေနိုင်သည်။ SuperJoy တွင် ၂ နှစ်အာမခံကန့်သတ်ချက်ရှိပြီးကြိုတင်မှာယူမှုအတွက်ယခုရရှိနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှု ptzoptics.com/superjoy/.
PTZOptics သည်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းများအပါအ ၀ င်ထုတ်လွှင့်သည့်အရာအမျိုးမျိုးအတွက်စက်ရုပ် pan၊ tilt, zoom ကင်မရာဖြေရှင်းနည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး PTZOptics သည်အလွန်လေးစားခံရသည့်စနစ်ပေါင်းစည်းမှုကုမ္ပဏီမှအင်ဂျင်နီယာများသည်ရှုပ်ထွေးသောလိုအပ်ချက်များအတွက်“ ဆွစ်စစ်တပ်ဓား” ကိုဖန်တီးရန်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကင်မရာအစုစုတွင်ပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့စဉ်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အော်ဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားစက်ရုံကိုပျက်ပြားစေခဲ့သည် ထုတ်လွှင့်ရှုခင်းများ။ Downingtown, Pa ။ တွင်အခြေစိုက်သည်။ ထိုစတင်မှုသည် PTZ ကင်မရာအမျိုးအစားတွင်အကြီးမားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုအလျင်အမြန်ကျော်လွှားသွားသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးမှုကြောင့် PTZOptics သည် StreamGeeks livestream စီးရီးများအပါအ ၀ င်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောအရင်းအမြစ်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ PTZOptics မှပေါလ်ရစ်ချတ်သည်“ သင်၏ဘုရားကျောင်း Live Streaming ကိုကူညီခြင်း” နှင့်“ ပညာရေးတွင်တင်ပို့ခြင်း” စသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရှာဖွေရေးစာအုပ်များစွာကိုရေးသားခဲ့သည်။ သူ၏အဖွဲ့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုအတူတကွစုဝေးစေသည့်သုံးလတစ်ကြိမ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်။ PTZOptics သည် Professional video conferencing cameras များထုတ်လုပ်သည့် HuddleCamHD ၏ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ www.PTZOptics.com.
: P: 401-792-7080
PTZOptics သည် Joystick Controller အသစ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2021
သင်၏ Streaming စွမ်းရည်များကို StreamGeeks ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖြင့် Jumpstart - နိုဝင်ဘာလ 25, 2020
Joystick တို့ PTZ PTZOptics မင်္ဂလာပါ 2021-02-18
နောက်တစ်ခု: 2020 Fall Television နှင့် Streaming Series များကို Blackmagic ဒီဇိုင်းအပေါ်မှီခိုအားထားခြင်း